Indlela oda nge passport cadastral Inthanethi?
Njengoba sekunama-yelwati wenza kwaba lula kakhulu ukuthola noma yiluphi ulwazi, kuhlanganise imibuzo, imibiko, kanye namanye amadokhumenti. Kulokhu, ungenza konke ukude, isibonelo, yayala ngokusebenzisa passport cadastral Inthanethi, ephuza ikhofi elimnandi at a cafe etafuleni ozithandayo. Ukuze ufunde indlela yokukwenza, esikutsho kuwe kulesi sihloko.
Kuphi futhi kanjani ungacela ukulethwa idokhumenti?
Kuze kube manje, kukhona izinketho eziningana for kokuthola ipasipoti cadastral. Ngokwesibonelo, uma unayo ngesikhathi sokuphumula, ungaxhumana Rosreestr yena. Kungenjalo, vakashela inkonzo Federal sokubhalisa isimo cadastre futhi ekudwetshweni kwamabalazwe, kunengqondo ukuphathisa othandekayo wakho, kodwa kuphela uma eqinisekisiwe ngumuntu imibhalo ummeli olungisa izivumelwano ezifanele.
Ngaphezu kwalokho, umyalo passport cadastral Inthanethi ungokoqobo, ngokuvakashela iwebhusayithi lenhlangano futhi bashiyele inzalo yabo isicelo. Uma wayefisa, enze isicelo ngokuthumela uhlu kwemibhalo edingekayo ngeposi noma ngokugcwalisa ifomu ekhethekile kusayithi kwemisebenzi yomphakathi.
Yini odinga ukuyazi ekulungiseleleni isicelo idokhumenti?
Ngaphambi oda ipasipoti cadastral kuya ku-intanethi, odinga ukukwazi ezigqamile ezimbalwa:
idokhumenti ukudluliswa inkonzo ikhokhelwa;
izindleko izinkonzo ngabanye kanye nezinhlangano ezingokomthetho ihlukile;
Amanani Ukuhamba ipasipoti elektroniki kanye imeyili zihlukile;
ukubhaliswa kanye Ukukhishwa passport kuyenziwa zingakapheli izinsuku 5 emva ukucutshungulwa kwesicelo.
Kuyini izindleko imali yokubhalisa sithumele dokhumenti?
Ake sithi unquma oda nge passport cadastral Inthanethi. Lizobiza malini? Kulokhu inani Imali yokubhalisa kuzoncika ngabe wena njalo isakhamuzi noma isilinganiso usomabhizinisi kanye nomnikazi. Ngokwesibonelo, endabeni yokuqala, imali kuyoba 200 kuphela, kanti eyesibili - ruble 600.
Ngomyalo impahla passport enguqulweni yayo electronic uyakukusindisa kakhulu, kusukela kuleli cala, duty isitembu esigabeni sokuqala izakhamuzi izobiza 150, kanti eyesibili - ruble 300.
Yini imibhalo kudingeka ukubhaliswa?
Angazi kodwa, indlela oda ipasipoti cadastral indlu nge-Internet? Qala nge kwathatha indawo izinsiza zomphakathi kanye ukulungiswa esilandelayo imibhalo:
isicelo, ugcwalise ifomu ekhethekile ngogesi;
amandla yokuqala Ummeli omele;
idokhumenti yokuqala zetayitela efulethini noma isiza;
irisidi Original sekukhokhelwa Imali yokubhalisa.
Ukuze uthole ukwaziswa sendlela oda a akhiphe cadastral kuya ku-intanethi, uzokutshela ku.
Indlela oda idokhumenti efulethini ngokusebenzisa ingosi kwemisebenzi yomphakathi?
Udinga cadastral ipasipoti indlu? Sanquma ukubheka portal kwemisebenzi yomphakathi? Kulokhu, uqale nge yokubhalisa evamile, ngemva kwalokho wena uyobe ukufinyelela i-akhawunti yakho siqu. Ngakho, ake sithi sengidlulile yokubhalisa esisemthethweni nokugunyazwa. Okulandelayo, iya ikhasi lasekhaya ingosi, swayipha phansi ninake kukholamu (egqanyisiwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka) enesihloko esithi "amasevisi Electronic namasevisi."
In the isinyathelo esilandelayo, ngaphambi oda nge-inthanethi cadastral iphasipoti, ukhethe lwesithathu kusukela kumenyu emelelwa isithonjana. Ibizwa ngokuthi "Ukuthola Ulwazi kusukela OCG."
Indlela ugcwalise ifomu nophenyo?
Ngemva kokuguqukela kwakhe isixhumanisi ngenhla imifanekiso uqiniseka uthole ifomu ikhasi e-isicelo. Ngokulandelayo, uzodinga ucacise bese ukhetha idatha efanele. Ngokwesibonelo, sinake isigaba sokuqala ifomu - "cadastre ngcaphuno mayelana nempahla ...." Uma uchofoza umcibisholo ngakwesokudla ngaphansi, bese kusuka kwimenyu, ungakhetha "ipasipoti cadastral".
Ukuze oda nge-Internet cadastral iphasipoti, ukhethe "izigaba Into", njengokuthi "Igumbi" (uma esinazo emqondweni idokhumenti efulethini). Khona-ke, kufanele bakhombise inombolo cadastral noma ikheli eliphelele komhiaba. Ungase futhi ukurekhoda kokubili. Ekugcineni, ngemva kokuqeda zonke izinkundla ezidingekayo, ukhethe ifomu indlela yokunikeza idatha ezidingekayo kuwe. Ngokwesibonelo, i-passport cadastral ungathola ngesimo:
Incwadi engokomthetho ephepheni, akhiqizwa iyiphi gumbi Rosreestra;
idokhumenti ngogesi nge isixhumanisi kulo;
idokhumenti wathola ngeposi.
Khona-ke kudingeka ugcwalise imeyili yakho, faka umbhalo kusuka ikhodi umazisi bese uya ekhasini elilandelayo. Futhi siyaqhubeka ngikuxoxele kanjani ungakwazi oda ipasipoti cadastral kuya ku-intanethi.
Khombisa ukuthi ifomu lofaka isicelo?
Ngemva ngokuchofoza isixhumanisi ekupheleni ifomu, uzoyiswa ku ifomu elisha lapho kufanele kuphawulwe imininingwane yomfakisicelo. Lokho, ucacise ukuthi wena abantu zemvelo, osomabhizinisi, noma basonta izigaba ezahlukene izakhamuzi, isibonelo, kungenzeka abantu kuvunyelwe yikhotho, abameleli ngezimali zikahulumeni kanye nekhomishini kuyona ukuphenywa kokuphulwa amacala ezikweletini, nokunye. D.
Okulandelayo, kumelwe usho ulwazi olulandelayo mayelana nawe:
SNILS (uma ekhona);
zinhlobo idokhumenti enikeziwe (ipasipoti);
inombolo, uchungechunge, osukwini lokukhishwa;
Ekugcineni kuyoba kuphela setha umkhaza ebhokisini elifanele bese uqinisekisa imvume yakho ukusebenza kwedatha futhi uthumele ukuba Rosreestr. Uma usuvele wagcwalisa ifomu futhi wagcwalisa zonke izimfuneko engenhla, uzobona kuphela kufanele uhlole ebhaliwe, uqinisekise isicelo bese ulinda i-passport cadastral. Kungenziwa yayala nge-Internet kanye namanye amaphepha emvume, uma uthanda, ngisho athumele isicelo isitatimende ukubhaliswa cadastral.
Hlola isicelo lesifanele kwemininingwane
In esigabeni sesithathu, uzobona usukulungele ukuthumela ifomu, okuyinto izofakwa ohlwini impahla, ikheli kanye nemininingwane yokuxhumana. Zonke lezi idatha kumele ufundisisa futhi uhlole. Endabeni ka iphutha noma ngephutha, Ukusebenzisa izici umhleli bese sibuyela emuva okulotshwe. Futhi uma konke ilungile, ungabhalisela futhi uthumele i-nophenyo noma vele uthumele engabhalisiwe.
Uma nenza okulungile nguwe, ekhasini elilandelayo uzobona ifomu encane nempendulo omuhle ukubhalisa futhi ecacisa inombolo yesicelo. Kukhona uzobona isixhumanisi elikuvumela ukuba siqaphele intuthuko imisebenzi ehlobene irisidi ipasipoti cadastral indlu.
Indlela oda ipasipoti cadastral we Isiqinti esibiza?
Kuleso simo, uma udinga ukuklanywa passport cadastral izwe, indlela ekufakwa ngayo izicelo kumele kwenziwe phezu isimiso efanayo ne efulethini noma iyiphi enye indawo. Nokho, uma ukhetha into kufanele ucacise "Icebo" bese ugcwalisa wonke amakholomu kudingwa Isifaniso.
Indlela hlola isimo isicelo sakho?
Hlola isimo izicelo ethunyelwe ungase futhi ube ku-intanethi. Ngenxa yale njongo kubalulekile ukuxhumanisa elawulwa kude, ebhokisini elingenalutho inombolo yakho isicelo, ikhodi ukubonisa isithombe bese uthumela. Ngenxa yalokho, lapho uzokuphendula kuwe: "Isicelo sakho kanye nenombolo .... Kungenxa isimo "okulindile inkokhelo". Ngezansi isamba Imali yokubhalisa uzobe esibekiwe, futhi okumele ikhokhwe ngaphambi kokuthi isicelo sakho izohanjiswa ukucabangela. Ngemva kwalokho, oyibhalisile isicelo ikheli le-imeyili uzothola impendulo evela ikhodi yokukhokha kanye lezinketho zokukhokha amaningi.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi ungazithola kanjani futhi kuphi oda ipasipoti cadastral kuya ku-intanethi.
Indlela akhokhe imali isimo Ze-Internet?
Ukuze inkokhelo kumelwe uchofoze isixhumanisi kuya kwesobunxele e- ie-mail, faka ikhodi yokukhokha bese ukhetha okukodwa okukhethwa kukho okulandelayo:
ezikhumulweni, esikhwameni amakhadi electronic futhi "Kiwi Bank";
ezikhumulweni, imali Ural Bank Reconstruction and Development;
inkonzo eqhelile Sberbank eRussia;
amakhadi kanye izinkokhelo mobile Bank "Taurian";
izinkokhelo zeselula namasevisi lasebhange "amasevisi yokukhokha".
Kafushane, ukuthola iphasiphothi efulethini noma umhlaba mhlawumbe ukude. Nokho, ukucabangela isicelo sakho zizokwenziwa kuphela ngemva kokuba imali yezindleko zomthetho.
"Abaculi Ikota" (Ekaterinburg) - isixazululo entsha ngokuphelele isitayela yezakhiwo
Indlela Thola Inzuzo Resale emafulethini.
Sample isaziso ukudayiswa esigxotsheni yayo indlu. isaziso notarial ukudayisa amasheya
LCD "Colours of Summer": incazelo, ukubuyekezwa
Indlela ukuqasha ifulethi Petersburg: zenze konke ezingakwenza ukuze sigweme ukudukiswa!
"Nikitinskaya izindlu" - a yesimanje Peter
Emisebeni Blackbody futhi yayo
Uhlobo lwe Tropical of zisetshenziswa izitshalo herbaceous nezinye Cymbopogon
Indlela Yokwenza oftalmotonometrii izinsimbi. Tonometer Maklakova: idivayisi isicelo futhi
Njengoba incwadi iphupho kusho intombazane ephusheni - ke akuwona umcimbi ezimnandi njalo
Ungashintsha kanjani igama elithi "Oxhumana Naye"
Umakhi Ausini: uchungechunge nokubuyekezwa
Yikuphi okungcono ukuthenga vacuum cleaner ekhaya? abanikazi Izibuyekezo
Ukunakekelwa isikhumba ebusweni ebusika
Ushizi ice cream: izimfihlo ukupheka dessert yasekuqaleni
-Akhawunti Personal - ngokudingeka ezibalulekile